နှစ်၂၀ ပြည့် အာကာသစခန်း ကနေ မဲပေးသူ
ဒီတပတ်တော့ မြေကမ္ဘာကနေ မိုင် ၂၀၀ ကျော် အကွာမှာရှိတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသ စခန်းမှာ လူသားတွေ နေထိုင်တာ အနှစ် နှစ်ဆယ် ပြည့်တဲ့၂၀၂၀ မှာ အမေရိကန် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အာကာသထဲကနေ မဲပေးတဲ့ အကြောင်း ပြောပြပေးမှာပါ။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲရုံတွေမှာ မဲပေးကြသလို ကြိုတင်မဲကိုလည်း စာတိုက်က ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်မဲပေးတဲ့ ဌာနတွေမှာ ဖြစ်စေ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ မဲပေးကြတဲ့အထဲ အမေရိကန် အာကာသယာဉ်မှုး Kate Rubins ကတော့ အာကာသထဲကနေ မဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကနေ မိုင် ၂၀၀ ကျော် အကွာမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ တနာရီကို မိုင် ၁၇ ၅၀၀ နှုန်းနဲ့ ပတ်နေတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသ စခန်းထဲကနေ မဲပေးခဲ့တာပါ။
“မဲပေးဖို့အတွက် ပြည်ပ ခရီးသွားနေတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတွေ ဖြည့်ရတဲ့ လျှောက်လွှာပုံစံမှာ ဖြည့်ပြီး လျှောက်ရပါတယ်။ ပြည်ပရောက် အမေရိကန် နိုင်ငံသား ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ တကယ်ကိုက်မကိုက် ကတော့ ကျမလည်း မသိပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျမတို့က ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာ ရှိနေတာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာတော့ မဟုတ်ဖူး အဝေးမှာတော့ ရောက်နေတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီပုံစံထဲ မှာပဲ ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။”
အခုလို အာကာသထဲမှာ မဲပေးတာဟာ Kate အတွက် ပထမဆုံး အကြိမ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း အခုလိုပဲ အာကာသထဲကနေမဲပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့
စူးစမ်းလေ့လာရေး ခရီးစဉ် အမှတ် ၄၈- ၄၉ မှာ အဖွဲ့ဝင် တဦးအနေနဲ့ အာကာသထဲ သွားရောက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အာကာသယာဉ်မှုးတွေ မဲပေးခွင့်ကို ၁၉ ၉ ၇ ခုနှစ်မှာ တက်ဆက်စ် ပြည်နယ်ကနေ တရားဝင်ပြဌာန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ဆက်စ် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ မဲပေးခွင့်ရှိသူတဦးဟာ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့ ကာလမှာ ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ဖြစ်စေ အာကာသထဲရောက်နေမယ် ဆိုရင် မဲပေးခွင့် ပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကို တက်ဆက်စ် ပြည်နယ်မှာ ပြဌာန်းရတဲ့ အကြောင်းရင်း တခုကတော့ အဲဒီမှာ နာဆာရဲ့ Johnson Space Center (JSC) အာကာသစခန်း ရှိပြီး အာကာသ ယာဉ်မှုး အများစုဟာ အဲဒီပြည်နယ်မြို့တော် Houston မှာ နေကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယာဉ်မှုး တဦးဟာ အာကာသထဲမသွားခင် သူဟာ ရွေးကောက်ပွဲ နေ့မှာ အာကာသထဲ သူရောက်နေမယ် ဆိုတာကို ကြိုပြီး အကြောင်းကြားရပါတယ်။
အာကာသထဲရောက်နေတဲ့ ယာဉ်မှုးတွေ မဲပေးတဲ့ အခါ အွန်လိုင်းကနေ ပေးရတဲ့ အီလက်ထရောနစ် မဲပေးစံနစ်ကို သုံးရပါတယ်။
“ကျမတို့ရတဲ့ မဲပြားက လျှို့ဝှက် ကုဒ်နဲ့ ပို့လိုက်တာပါ။ အဲဒီမဲပြားကို ကျမတို့နေတဲ့ ကောင်တီက စာရေးဆီကို ပြန်ပို့ပေးတဲ့ အခါ သူတို့က မဲစာရင်းမှာ ထည့်ရေတွက်ပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းခင်မှာ Johnson အာကာသစခန်း JSC မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေး စခန်းကနေ အာကာသယာဉ်မှုး ဆီကို လျှို့ဝှက် ကုဒ်နဲ့ အွန်လိုင်း မဲပြား ကို uplink နဲ့ပို့ပေး သလို မဲပေးတဲ့ ယာဉ်မှုးကလည်း သူ့မဲကို downlink နဲ့ ကောင်တီကို ပြန်ပို့ပေးရတာပါ။
ပထမဆုံး အာကာသထဲကနေ မဲပေးခဲ့သူက ၁၉ ၉ ၇ ခုနှစ်က ရုရှား အာကာသစခန်း Mir (Russian Space Station) ကို ရောက်နေတဲ့ နာဆာက အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှုး David Wolf ဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသ ယာဉ်မှုးတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ အာကာသ ခရီးစဉ်တွေဟာ ၆ လလောက် အထိ ကြာမြင့်တတ်တာဖြစ်ပြီး အခုလို အဝေးရောက် မဲပေးခွင့်ရတာကို ဂုဏ်ယူတယ်လို့ အာကာသယာဉ်မှုး Kate ကပြောပါတယ်။
“အခုလို မဲပေးခွင့်ရတာဟာ ကျမတို့အတွက် တကယ်ဂုဏ်ယူစရာပါ။ မဲပေးတာဟာ ကျမတို့ လုပ်ရမယ့် တာဝန်တခုလို့ ထင်ပါတယ်။ မဲပေးတာအတွက် ဂုဏ်ယူသလို ဒါဟာ နိုင်ငံသား တယောက်ရဲ့ တာဝန်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာကာသ ထဲကနေ မဲပေးခွင့်ရတာဟာ သိပ်ကံကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။”
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမဲပေးဖို့ အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသ စခန်းထဲက အာကာသယာဉ်မှုးတွေ နေတဲ့ နေရာက အခန်းတခု ရှေ့မှာ ISS မဲရုံလို့ စာတမ်းကပ်ထားတာပါ။ Kate ဟာ အဲဒီ မဲရုံမှာ မဲပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မဲစာရင်းထဲမှာတော့ သူမဲပေးတဲ့ လိပ်စာကို ‘Low- Earth orbit’ ကမ္ဘာပတ်လမ်း လို့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
သူမဲပေးပြီး နောက်တနေ့မှာပဲ နာဆာ အာကာသယာဉ်မှုးများ NASA Astronauts အကောင့်ကနေ “အာကာသယာဉ်မှုး Kate Rubins မဲပေးခဲ့တာသိရလို့သိပ်ဝမ်းသာကြောင်းနဲ့ သူဟာ သူများတွေလို မဲပေးဖို့ အကြာကြီးတန်းစီစရာ မလိုဘူး” လို့ တွစ်တာမှာ ရေးပါတယ်။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအာကာသစခန်းမှာ လူသားတွေ နေထိုင်ပြီး သုတေသန လုပ်နေတာ အနှစ် ၂၀ ရှိပါပြီ။ Kate ဟာ ဒီအနှစ် ၂၀ အထိန်းအမှတ်မှာလည်း သုတေသနတာဝန်နဲ့ ဒီစခန်းကိုရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး မဲပေးခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ အနှစ် ၂၀ အထိန်းမှတ် မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်းမှာ Kate နဲ့အတူရှိနေသူ တွေကတော့ ရုရှား နိုင်ငံသား တွေ ဖြစ်တဲ့Sergey Ryzhikov နဲ့ Sergey Kud-Sverchkov တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေး စခန်းကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့ အခါ Sergey Ryzhikov က အခုလို နှုတ်ဆက်စကား ပြောပါတယ်။
“အာကာသစခန်း နှစ် ၂၀ ပြည့် အထိန်းအမှတ်မှာ ကျနော်တို့ ဒီမှာ ရောက်နေတာ သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက အဖွဲ့တွေလည်း ကျနော်တို့နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။”
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာကာသစခန်းကို သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာ နာဆာရဲ့ Expedition 1 စူးစမ်းရေးခရီစဉ် အမှတ် ၁ နဲ့ လူသားတွေ သွားရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခု အနှစ် ၂၀ ပြည့်တဲ့ အထိ ဆက်ပြီး အဲဒီမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ နေထိုင် သုတေသန လုပ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်အာကာသယာဉ်မှုး Kate နဲ့ ရုရှားအာကာသယာဉ်မှုး Ryzhikov တို့ကတော့ စူးစမ်းရေး ခရီးစဉ် အမှတ် ၆၄ နဲ့ သွားရောက်နေသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Kate ဟာ အဏုဇီဝဗေဒ ပညာရှင် တဦးပါ။
“အခု ခရီးစဉ် အတွင်းမှာ သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနတွေ အများကြီး လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကျမက သိပ္ပံပညာရပ်နဲ့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ပဲ အမြဲ စဉ်းစားနေတာပါ။ အခုလုပ်မယ့် သုတေသနထဲမှာ အာကာသထဲ သက်ရှိဆဲလ် ကလပ်စည်းတွေ ဘယ်လိုကြီးထွားလာတယ် ဆိုတာကို လေ့လာဖို့ ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ အခု နှလုံးမှာရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေ ဘယ်လို ကြီးထွားတာကို လေ့လာနေသလို တခြား တစ်ရှုး တွေကိုလည်း လေ့လာဖို့ရှိပါတယ်။ လို့ ပြောသွားတာပါ။”
ဟုတ်ပါတယ်။ အာကာသစခန်းမှာက ကမ္ဘာပေါ်မှာလို ဆွဲငင်အား မများတဲ့ အတွက် အခုလို ဆဲလ် တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို လေ့လာဖို့ အဆင်ပြေနေတာပါ။ အာကာသယဉ်မှုး Kate Rubins က သူဟာ microbial လို့ခေါ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားလို အဏုကြည့်မှန်နဲ့ကြည့်မှမြင်ရတဲ့ သက်ရှိတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေ အများအပြား လုပ်ဖို့ ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီ သက်ရှိသတ္တဝါလေးတွေရဲ့ အနေထားကို သိအောင် ကျမတကယ် လေ့လာချင်ပါတယ်။ အခုဆို ကျမတို့ ဒီအာကာသစခန်းမှာ သုတေသနလုပ်နေတာ အနှစ် ၂၀ ရှိပါပြီ။ ဒီအကောင်လေးတွေဟာလည်း ကျမတို့နဲ့ အတူ ရှိနေတာမို့ ဒီနေရာမှာ သူတို့အုပ်စုတွေထဲက ဘယ်သူတွေ ရှိနေတယ်၊ ဘယ်မှာ နေတယ်၊ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သူတို့ ဘယ်လို ပြောင်းလဲသွားတယ် ဆိုတာတွေကို သိအောင်လုပ်ဖို့ ကျမသိပ်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ လို့ ပြောပါတယ်။”
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အာာကသ စခန်းမှာ လူသားတွေ အခြေချသုတေသနလုပ်နိုင်တဲ့ အနှစ် ၂၀ ပြည့် နေ့မှာ အထိန်းအမှတ် ညစာ စားပွဲလေး ကျင်းပ မှာ ဖြစ်သလို သိပ္ပွံဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှုတွေ ဆက်လုပ်မယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
Stanford တက္ကသိုလ် က ပါရဂူဘွဲ့ ရထားတဲ့ Kate ဟာ အာကာသယာဉ်မှုးတဦး ဖြစ်သလို ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်း ရာပေါင်းများစွာကို. ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ တဦးလည်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာ တင်ပြရင်း ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ဒီတပတျတော့ မွကေမ်ဘာကနေ မိုငျ ၂၀၀ ကြျော အကှာမှာရှိတဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသ စခနျးမှာ လူသားတှေ နထေိုငျတာ အနှဈ နှဈဆယျ ပွညျ့တဲ့၂၀၂၀ မှာ အမရေိကနျ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ အာကာသထဲကနေ မဲပေးတဲ့ အကွောငျး ပွောပွပေးမှာပါ။
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမှာ မဲရုံတှမှော မဲပေးကွသလို ကွိုတငျမဲကိုလညျး စာတိုကျက ဖွဈစေ၊ ကွိုတငျမဲပေးတဲ့ ဌာနတှမှော ဖွဈစေ ပုံစံမြိုးစုံနဲ့ မဲပေးကွတဲ့အထဲ အမရေိကနျ အာကာသယာဉျမှုး Kate Rubins ကတော့ အာကာသထဲကနေ မဲပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာကနေ မိုငျ ၂၀၀ ကြျော အကှာမှာရှိတဲ့ ကမ်ဘာပတျလမျးကွောငျးထဲမှာ တနာရီကို မိုငျ ၁၇ ၅၀၀ နှုနျးနဲ့ ပတျနတေဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသ စခနျးထဲကနေ မဲပေးခဲ့တာပါ။
“မဲပေးဖို့အတှကျ ပွညျပ ခရီးသှားနတေဲ့ အမရေိကနျ နိုငျငံသားတှေ ဖွညျ့ရတဲ့ လေြှာကျလှာပုံစံမှာ ဖွညျ့ပွီး လေြှာကျရပါတယျ။ ပွညျပရောကျ အမရေိကနျ နိုငျငံသား ဆိုတဲ့ သတျမှတျခကျြနဲ့ တကယျကိုကျမကိုကျ ကတော့ ကမြလညျး မသိပါဘူး။ တကယျတော့ ကမြတို့က ကမ်ဘာပတျလမျးကွောငျးထဲမှာ ရှိနတောပါ။ အမရေိကနျနိုငျငံထဲမှာတော့ မဟုတျဖူး အဝေးမှာတော့ ရောကျနတောပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အဲဒီပုံစံထဲ မှာပဲ ဖွညျ့လိုကျပါတယျ။”
အခုလို အာကာသထဲမှာ မဲပေးတာဟာ Kate အတှကျ ပထမဆုံး အကွိမျတော့ မဟုတျပါဘူး။ ၂၀၁၆ ရှေးကောကျပှဲတုနျးကလညျး အခုလိုပဲ အာကာသထဲကနမေဲပေးခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုနျးကတော့
စူးစမျးလလေ့ာရေး ခရီးစဉျ အမှတျ ၄၈- ၄၉ မှာ အဖှဲ့ဝငျ တဦးအနနေဲ့ အာကာသထဲ သှားရောကျ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျပွညျထောငျစုမှာ အာကာသယာဉျမှုးတှေ မဲပေးခှငျ့ကို ၁၉ ၉ ၇ ခုနှဈမှာ တကျဆကျဈ ပွညျနယျကနေ တရားဝငျပွဌာနျးပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ တကျဆကျဈ ပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲ ဆိုငျရာ ဥပဒအေရ မဲပေးခှငျ့ရှိသူတဦးဟာ ကွိုတငျမဲပေးခှငျ့ရှိတဲ့ ကာလမှာ ဖွဈစေ၊ ရှေးကောကျပှဲနမှေ့ာ ဖွဈစေ အာကာသထဲရောကျနမေယျ ဆိုရငျ မဲပေးခှငျ့ ပွုထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီဥပဒကေို တကျဆကျဈ ပွညျနယျမှာ ပွဌာနျးရတဲ့ အကွောငျးရငျး တခုကတော့ အဲဒီမှာ နာဆာရဲ့ Johnson Space Center (JSC) အာကာသစခနျး ရှိပွီး အာကာသ ယာဉျမှုး အမြားစုဟာ အဲဒီပွညျနယျမွို့တျော Houston မှာ နကွေတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ယာဉျမှုး တဦးဟာ အာကာသထဲမသှားခငျ သူဟာ ရှေးကောကျပှဲ နမှေ့ာ အာကာသထဲ သူရောကျနမေယျ ဆိုတာကို ကွိုပွီး အကွောငျးကွားရပါတယျ။
အာကာသထဲရောကျနတေဲ့ ယာဉျမှုးတှေ မဲပေးတဲ့ အခါ အှနျလိုငျးကနေ ပေးရတဲ့ အီလကျထရောနဈ မဲပေးစံနဈကို သုံးရပါတယျ။
“ကမြတို့ရတဲ့ မဲပွားက လြှို့ဝှကျ ကုဒျနဲ့ ပို့လိုကျတာပါ။ အဲဒီမဲပွားကို ကမြတို့နတေဲ့ ကောငျတီက စာရေးဆီကို ပွနျပို့ပေးတဲ့ အခါ သူတို့က မဲစာရငျးမှာ ထညျ့ရတှေကျပါတယျ။”
ရှေးကောကျပှဲမကငျြးခငျမှာ Johnson အာကာသစခနျး JSC မွပွေငျထိနျးခြုပျရေး စခနျးကနေ အာကာသယာဉျမှုး ဆီကို လြှို့ဝှကျ ကုဒျနဲ့ အှနျလိုငျး မဲပွား ကို uplink နဲ့ပို့ပေး သလို မဲပေးတဲ့ ယာဉျမှုးကလညျး သူ့မဲကို downlink နဲ့ ကောငျတီကို ပွနျပို့ပေးရတာပါ။
ပထမဆုံး အာကာသထဲကနေ မဲပေးခဲ့သူက ၁၉ ၉ ၇ ခုနှဈက ရုရှား အာကာသစခနျး Mir (Russian Space Station) ကို ရောကျနတေဲ့ နာဆာက အမရေိကနျအာကာသယာဉျမှုး David Wolf ဖွဈပါတယျ။
အာကာသ ယာဉျမှုးတှအေတှကျ သူတို့ရဲ့ အာကာသ ခရီးစဉျတှဟော ၆ လလောကျ အထိ ကွာမွငျ့တတျတာဖွဈပွီး အခုလို အဝေးရောကျ မဲပေးခှငျ့ရတာကို ဂုဏျယူတယျလို့ အာကာသယာဉျမှုး Kate ကပွောပါတယျ။
“အခုလို မဲပေးခှငျ့ရတာဟာ ကမြတို့အတှကျ တကယျဂုဏျယူစရာပါ။ မဲပေးတာဟာ ကမြတို့ လုပျရမယျ့ တာဝနျတခုလို့ ထငျပါတယျ။ မဲပေးတာအတှကျ ဂုဏျယူသလို ဒါဟာ နိုငျငံသား တယောကျရဲ့ တာဝနျလို့လဲ ထငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အာကာသ ထဲကနေ မဲပေးခှငျ့ရတာဟာ သိပျကံကောငျးတယျလို့ ခံစားရပါတယျ။”
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲမဲပေးဖို့ အတှကျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသ စခနျးထဲက အာကာသယာဉျမှုးတှေ နတေဲ့ နရောက အခနျးတခု ရှမှေ့ာ ISS မဲရုံလို့ စာတမျးကပျထားတာပါ။ Kate ဟာ အဲဒီ မဲရုံမှာ မဲပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
မဲစာရငျးထဲမှာတော့ သူမဲပေးတဲ့ လိပျစာကို ‘Low- Earth orbit’ ကမ်ဘာပတျလမျး လို့ မှတျတမျးတငျပါတယျ။
သူမဲပေးပွီး နောကျတနမှေ့ာပဲ နာဆာ အာကာသယာဉျမှုးမြား NASA Astronauts အကောငျ့ကနေ “အာကာသယာဉျမှုး Kate Rubins မဲပေးခဲ့တာသိရလို့သိပျဝမျးသာကွောငျးနဲ့ သူဟာ သူမြားတှလေို မဲပေးဖို့ အကွာကွီးတနျးစီစရာ မလိုဘူး” လို့ တှဈတာမှာ ရေးပါတယျ။
အပွညျပွညျ ဆိုငျရာအာကာသစခနျးမှာ လူသားတှေ နထေိုငျပွီး သုတသေန လုပျနတော အနှဈ ၂၀ ရှိပါပွီ။ Kate ဟာ ဒီအနှဈ ၂၀ အထိနျးအမှတျမှာလညျး သုတသေနတာဝနျနဲ့ ဒီစခနျးကိုရောကျနတေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံသား ဖွဈပွီး မဲပေးခှငျ့ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီ အနှဈ ၂၀ အထိနျးမှတျ မှာ အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသစခနျးမှာ Kate နဲ့အတူရှိနသေူ တှကေတော့ ရုရှား နိုငျငံသား တှေ ဖွဈတဲ့Sergey Ryzhikov နဲ့ Sergey Kud-Sverchkov တို့ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကို အောကျတိုဘာလ ၃၁ ရကျနမှေ့ာ မွပွေငျထိနျးခြုပျရေး စခနျးကနေ ဆကျသှယျမေးမွနျးတဲ့ အခါ Sergey Ryzhikov က အခုလို နှုတျဆကျစကား ပွောပါတယျ။
“အာကာသစခနျး နှဈ ၂၀ ပွညျ့ အထိနျးအမှတျမှာ ကနြျောတို့ ဒီမှာ ရောကျနတော သိပျပြျောစရာ ကောငျးပါတယျ။ နိုငျငံတကာက အဖှဲ့တှလေညျး ကနြျောတို့နဲ့အတူ ပြျောရှငျကွမယျလို့ ထငျပါတယျ။”
အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာကာသစခနျးကို သက်ကရာဇျ ၂၀၀၀ နိုဝငျဘာလ ၂ ရကျနမှေ့ာ နာဆာရဲ့ Expedition 1 စူးစမျးရေးခရီစဉျ အမှတျ ၁ နဲ့ လူသားတှေ သှားရောကျခဲ့တာ ဖွဈပွီး အခု အနှဈ ၂၀ ပွညျ့တဲ့ အထိ ဆကျပွီး အဲဒီမှာ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ နထေိုငျ သုတသေန လုပျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
အမရေိကနျအာကာသယာဉျမှုး Kate နဲ့ ရုရှားအာကာသယာဉျမှုး Ryzhikov တို့ကတော့ စူးစမျးရေး ခရီးစဉျ အမှတျ ၆၄ နဲ့ သှားရောကျနသေူတှေ ဖွဈပါတယျ။ Kate ဟာ အဏုဇီဝဗဒေ ပညာရှငျ တဦးပါ။
“အခု ခရီးစဉျ အတှငျးမှာ သိပ်ပံဆိုငျရာ သုတသေနတှေ အမြားကွီး လုပျဖို့ရှိပါတယျ။ ကမြက သိပ်ပံပညာရပျနဲ့ လကျတှေ့ စမျးသပျမှုတှလေုပျဖို့ပဲ အမွဲ စဉျးစားနတောပါ။ အခုလုပျမယျ့ သုတသေနထဲမှာ အာကာသထဲ သကျရှိဆဲလျ ကလပျစညျးတှေ ဘယျလိုကွီးထှားလာတယျ ဆိုတာကို လလေ့ာဖို့ ဆကျလုပျနပေါတယျ။ အခု နှလုံးမှာရှိတဲ့ ဆဲလျတှေ ဘယျလို ကွီးထှားတာကို လလေ့ာနသေလို တခွား တဈရှုး တှကေိုလညျး လလေ့ာဖို့ရှိပါတယျ။ လို့ ပွောသှားတာပါ။”
ဟုတျပါတယျ။ အာကာသစခနျးမှာက ကမ်ဘာပျေါမှာလို ဆှဲငငျအား မမြားတဲ့ အတှကျ အခုလို ဆဲလျ တှရေဲ့ တညျဆောကျပုံကို လလေ့ာဖို့ အဆငျပွနေတောပါ။ အာကာသယဉျမှုး Kate Rubins က သူဟာ microbial လို့ချေါတဲ့ ဘကျတီးရီးယားလို အဏုကွညျ့မှနျနဲ့ကွညျ့မှမွငျရတဲ့ သကျရှိတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး စူးစမျးလလေ့ာမှုတှေ အမြားအပွား လုပျဖို့ ရှိတယျလို့ ပွောပါတယျ။
“ဒီ သကျရှိသတ်တဝါလေးတှရေဲ့ အနထေားကို သိအောငျ ကမြတကယျ လလေ့ာခငျြပါတယျ။ အခုဆို ကမြတို့ ဒီအာကာသစခနျးမှာ သုတသေနလုပျနတော အနှဈ ၂၀ ရှိပါပွီ။ ဒီအကောငျလေးတှဟောလညျး ကမြတို့နဲ့ အတူ ရှိနတောမို့ ဒီနရောမှာ သူတို့အုပျစုတှထေဲက ဘယျသူတှေ ရှိနတေယျ၊ ဘယျမှာ နတေယျ၊ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ သူတို့ ဘယျလို ပွောငျးလဲသှားတယျ ဆိုတာတှကေို သိအောငျလုပျဖို့ ကမြသိပျစိတျဝငျစားပါတယျ။ လို့ ပွောပါတယျ။”
အပွညျပွညျဆိုငျရာ အာာကသ စခနျးမှာ လူသားတှေ အခွခေသြုတသေနလုပျနိုငျတဲ့ အနှဈ ၂၀ ပွညျ့ နမှေ့ာ အထိနျးအမှတျ ညစာ စားပှဲလေး ကငျြးပ မှာ ဖွဈသလို သိပ်ပှံဆိုငျရာ စူးစမျးမှုတှေ ဆကျလုပျမယျလို့လညျး သူက ပွောပါတယျ။
Stanford တက်ကသိုလျ က ပါရဂူဘှဲ့ ရထားတဲ့ Kate ဟာ အာကာသယာဉျမှုးတဦး ဖွဈသလို ဇီဝဗဒေဆိုငျရာ သုတသေနလုပျငနျး ရာပေါငျးမြားစှာကို. ပါဝငျဆောငျရှကျခဲ့သူ တဦးလညျး ဖွဈတယျ ဆိုတာ တငျပွရငျး ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။
အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ် ပထမဆုံးပျံသန်းတဲ့ Ingenuity ရဟတ်ယာဉ်